XOG: Maxaa Ogtahay in xubno ka tirsan Jubbaland ay ku kala xaniban yihiin Kismaayo iyo Muqdisho? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG: Maxaa Ogtahay in xubno ka tirsan Jubbaland ay ku kala xaniban...
XOG: Maxaa Ogtahay in xubno ka tirsan Jubbaland ay ku kala xaniban yihiin Kismaayo iyo Muqdisho?
Kismaayo (Halqaran.com) – Ilo xog ogaal ah oo aynu helayno ayaa waxaa ay sheegayaan in Xubno ka tirsan Howlwadeenada Wasaaradda Qorsheynta ee Dowlad goboleedka Jubbaland uu saameeyay Go’aankii kasoo baxay Dowladda ee lagu joojiyay duulimaadyadii tagi jiray Kismaayo.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta Jubbaland Aadan Ibraahiim Aw Xirsi ayaa sheegay in Xubno ka tirsan Wasaaradiisa ay Maalintii labaad ku kala xayiran yihiin Muqdisho iyo Kismaayo, kuwaas oo doonayay inay howlo shaqo qaarkood u soo aadan Muqdisho qaarna uga baxaan oo ay dib ugu laabtaan Kismaayo.
”Dhawr hawl-wadeen oo u shaqeeya Wasaaradda Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland oo qaarna shaqo u joogey qaarna u soo aadi lahaa ayaa maalintii labaad ku kala xanniban Kismaayo iyo Xamar”, ayuu yiri Wasiir Aw Xirs.
Go’aankii xayiraada ahaa oo ay Xukuumadda Soomaaliya saartay duulimaadyadii aadi jiray Magalada Kismaayo ayaa waxaa uu saameen ku yeeshay dad badan oo ay mas’uuliyiin ku jiraan, kuwaas oo haatan kala jooga Muqdisho iyo Kismaayo.
26-ka Bishaan ayuu ku eeg yahay qorshaha qaadista xanibaada Saddexda maalin ah ee Dowladda Federalka Somaliya ay saartay Magaalada Kismaayo.
Xubno ka tirsan Jubbaland oo ku kala xanibad Kismaayo iyo Muqdisho